गायक बन्छु भनेर सोचेको थिईन : सौगात ओझा - EAAWAJ (इ-आवाज)
कला / साहित्य मनोरञ्जन विशेष समाचार समाचार
गायक बन्छु भनेर सोचेको थिईन : सौगात ओझा
July 4, 2019 July 4, 2019 Bidhutma0Comments
कोहलपुर, असार १९,
प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा विविध रुपले आकर्षक रहेको सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा सोचे जस्तो भौतिक पूर्वाधार विकास अझै पनि हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार नभएकाले यहाँका स्थानीयको जनजीवन अगाडी आउन सकेको छैन । यि जिल्लाहरु पर्यटकिय हिसाबले निकै आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसमा पनि कला साहित्यको ठुलो सम्भावना रहेको छ । यस्तै सम्भावना बोकेको सुदूपश्चिमको एउटा सुन्दर जिल्ला हो डोटी ।
भौगोलिक रुपमा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित डोटी जिल्ला जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । डोटी जिल्लामा हिमाली, पहाडी, तथा तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरुको रहनसहन देख्न पनि सकिन्छ । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडको काखमा रहेको डोटी जिल्ला प्राकृतिक संसाधनहरुमा असाध्यै धनि भएकाले भविष्यमा विकासका अनेकौं सम्भावनाहरु पहिल्याउन सकिन्छ । यो जिल्ला कला, साहित्य, गीतसंगीतका लागी पनि निकै लोकप्रिय मानिएको छ । डोटीको जोरायलमा जन्मेका सौगात ओझा पछिल्लो समय गीतसंगीतमा निकै चर्चित रहेका छन् ।
तत्कालिन सरस्वती नगर तथा हालको जोरायल गाउँपालिका सैनेरी लेकमा वि.सं. २०४३ साल माघमा जन्मेका ओझाको नाम देशैभरि लोकप्रिय बनेको छ । उनले गायका थुप्रै गीतहरु निकै लोकप्रिय र चर्चित छन् । अभाव र अन्धकारमा बाल्यकाल बिताएका गायक ओझालाई कलाकारिता क्षेत्रमा आउने कहिल्यै लागेको थिएन । उनी भन्छन्,–‘बाल्यकालमा सायद म कलाकारिता तिर लागौला भनेर सोचेको थिईन । तर जब मैले नेपाली चलचित्र पहिलो पटक हलमा गएर हेरे त्यसपछि म कलाकार नै बन्छु भन्ने अठोट लिए ।’ कलाकारिता क्षेत्रमा आउन उनलाई घर परिवारको भरपुर साथ छ । सानो छदा कुनै ठाउँमा उनले गीत गाउँदा अरुले राम्रो छ भन्ने गर्थे । तर उनलाई पटक्कै विश्वास लाग्थेन ।
आफ्नै स्वर राम्रो छ भनेर विश्वास नगर्ने ओझोको नाम अहिले देश भरि फैलिएको छ । यो क्षेत्रसम्म आईपुग्दा उनले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताए । उनका अगाडी दुख तथा पिडाका ठुल्ठुला पहाडहरु थिए । उनले ति पहाड छिचोल्दै यहाँ सम्म आईपुगेका छन् । उनले भने,–‘म धेरै पटक मरेर बाचेको छु । रुखबाट लडे, खोलामा बगे, भिरबाट लडे, आगोमा परे, चली रहेको टेम्पोबाट खसे धेरै मृत्युहरु जिते ।’ गायक ओझाले आफूले मृत्युलाई विजयी गरेपनि आफ्नी आमा र छोरीलाई भने मृत्युबाट बचाउन सकेनन् ।
वि.सं. २०७१ साल असोज २० गते ठूलो बस दुर्घटना भयो । जहाँ उनले आफ्नी जननी र ६ वर्षकी छोरी गुमाए । गायक ओझाकी जीवन सारथी सम्झाना ओझा र छोरी अमिसा ओझा घाइते भए । त्यो कहाली लाग्दो दिन सम्झिदा उनी अहिले पनि भक्कानिएर रुन्छन् । उनले आफ्नो जीवनमा भएको कहाली लाग्दो घटनालाई गीत मार्फत पोखेका छन् । बाल्यावस्थादेखि मुटुको समस्या खेप्दै आएका उनको मुटुको भल्भ खराब भएको बताए । उनले भने,–‘औसधिले बाचेको ज्यान छ । आज होकि भोलि तर पनि समय सङ्गै चलिरहेको छु । जति बाहिर हासो खुसी छ, त्यो भन्दा बढी पिडामा बाचिरहेको छु ।’
उनी गीतसंगीतमा लागेको करिब ६ वर्ष भयो । उनले पहिलो गीत मन भित्र तिमी छौ तिम्रै झल्को आउँछ, भन्ने बोलको गीत बजारमा ल्याए जसमा उनको आफ्नै शब्द सङ्गीत र देबि घर्ती र उनकै आवाजमा छ । पहिले त उनको फिल्म क्षेत्रमा जाने एकदमै ठुलो धोको थियो । यसकारण उनले धेरै फिल्ममा एउटा सानो रोल खेल्न पनि भाडा माझ्ने देखि सबै काम गरे । उनले भने,–‘मैले फिल्म नै खेल्नको लागी भाडा समेत माझे यस्ता धेरै काम गरे । यस्तो काम गर्दा म गीत गाउने गर्थे । एक दिन सुटिङकै बेला भाडा माझिरहँदा एक जना अर्जुन सिलवाल सरले मेरो आवाज सुन्नुभयो । उहाँले नै मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो उहाँकै कारण आज म गीतसंगीतमा छु ।’
उनी सानैदेखि सडक नाटक मा सक्रिय थिए । फिल्म तिर उनको रुची भएपनि दर्शक तथा स्रोताहरुले उनका गीत नै मन पराएपछि उनी गीत गाउन थाले । गीत गाएर उनले सोचे जसरी परिवार पाल्न सकेका छैनन् । उनी भन्छन्,–‘अहिले धेरै गारो छ । एउटै गीतको लागी धेरै लाख खर्च गर्नुपर्छ । तर आउने स्रोत छैन । प्रतिष्पर्धाको जमाना छ । म संगका धेरै साथीहरु हराएका पनि छन् । म जसो तसो दुख पिडा सहेर भएपनि लागी परेको छु । हामी जस्तो सामान्य आर्थिक अवस्था भएकोलाई गीत गाएर बाँच्न मुस्किल छ ।’ उनीसंग गीतसङ्गीयस क्षेत्रमा लाग्दा लोकप्रिय तथा चर्चित भएको तथा जीवनको राम्रो अनुभव छ । हालसम्म उनी कार्यक्रमको लागी धेरै ठाउँ घुमिसकेका छन् । उनले भने,–‘६ वर्षको अवधीमा धेरै ठाउँमा पुगे । धेरै ठाउमा जादा धेरैको माया पाए । मञ्चमा धेरैको अगाडी जब ताली बज्छ, जिन्दगीको सब भन्दा ठूलो खुसी लाग्छ ।’
कला क्षेत्रमा लाग्दा धेरै दुख पिडाहरु सहनु परेको उनले बताए । धेरै ठाउँबाट धोका समेत पाएको तितो अनुभव सुनाए । कम्पनिदेखि केही ठाउँमा पैसा नदिएको तथा आफुलाई ठगेको उनी बताउँछन् । यस्ता थुप्रै चुनौतीको सामाना गर्दै निरन्तर गीत संगीतमा लागिरहेको उनको भनाई छ । ओझाले अहिलेसम्म लगभग डेढ दर्जन जति गीतसङ्गीत बजारमा ल्याईसकेका छन् । उनले तिज गीत, दशैं तिहारका गीत, लोक दिहोरी, लोक पप गीतहरु आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वर बजारमा ल्याएका छन् । भने केही गीतहरु अरुले पनि गाएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सौगात ओझा जस्ता हजारौ प्रतिभाहरु छन् । यहाँ यस्ता प्रतिभा छन् जुन कुना–कुनामा लुकेका छन् । त्यस्ता प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन कहि कतैबाट खासै पहल भएको पाईदैन । लुकेका प्रतिभाहरूको खोजी र अनुसन्धान तथा तिनीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनमा चिनाएर उचित कदर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाई हामी सबैको हो ।
← गाउँपालिकाको आठवटै वडामा स्वास्थ्य सेवा
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्धारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागी बजेट पारित →